Boko Xaram oo hoggaaminaysa isqarxinta - BBC News Somali
Boko Xaram oo hoggaaminaysa isqarxinta
Lahaanshaha sawirka Screengrab
Warbixin cusub ayaa sheegaysa in Boko Xaraam ay ka hor mareen kooxaha gacan saarka la leh ee loogu yeero dawladda islaamiga, oo ay noqdeen kooxda ugu dilka badan dunida.
Warbixinta oo la yiraahdo Tusaha argagixisada dunida, ayaa hoosta ka xarriiqday in 30% dilalka la xiriira qalalaasaha Boko xaraam ay kordheen tan iyo sannadkii hore.
Warbixinta oo uu soo saaray machadka dhaqaalaha iyo nabadda ee fadhigiisu yahay New York, ayaa muujinaysa in tan iyo wakhtigaas ay weerarradu laba jibaarmeen, ayadoo khasaaraha xoogiisana uu u badan yahay dalalka Ciraaq, Nigeria, Afghanistan, Pakistan iyo Suuriya.
Warbixinta ayaa sheegaysa kooxda loogu yeero dowladda Islaamiga iyo kuwa la halmaala iney mas’uul kayihiin kala bar dhimashooyinka la xiriira argagaxisnimada daafaha dunida ka dhaca.
Ayadoo halka ugu daran ay tahay Ciraaq, ayaa Nigeria waxay noqotey dal ay kusoo kordheen dhaq dhaqaaqyada argagaxisnimo sanadkii 2014-kii.
Boko Haram oo sidoo kale loo yaqaano laanta Galbeedka Africa ee IS – ayaa qaadey kala bar labaatankii weerar ee u xumaa sanadkii hore.
Taa waxaa ka mid ah hareereyntii magaalada Gamboru Ngala ee Nigeria.
In ka badan 300 oo ruux ayaa lagu diley, sidoo kale waxaa lagu dhaawacey tiro intaas ka badan, iyadoo magaalada inteeda badanna la burburiyey.
Sidoo kale, liiska waxaa qeybaha sare kaga jirey qulqulatooyinkii ka dhacey Koonfurta Sudan, iyadoo intii lagu guda jireyna ay fallaagadu dileen dad aad u tiro badan kuwaasoo gabbaad ka dhiganayey masjid ku yaalla magaalada Bentiu.
Dalalka ay ka dhaceen kiisaskii argagaxisnimo ee ugu xumaaa, sidoo kale waxaa ka dhacey barakacyadii ugu badnaa – taasoo tilmaameysa iney si xoog leh isugu xiran yihiin weerarada noocaas ah iyo mashaakilka qaxootiga.
Warbixinta ayaa sidoo kale tilmaameysa in waxyaabaha dhaliya argagaxisnimada ay ku kala duwan yihiin dalalka horumarey iyo kuwa uu yar yahay horumarkoodu.